Ukuhambelana kweScorpio kunye neScorpio: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo - Iimpawu Zezodiac
Ukuhambelana kweScorpio kunye neScorpio: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo
I-Scorpio kunye ne-Scorpio yokudibana yinto engakholelekiyo! Ngoba? Kungenxa yokuba le duo yazana kakuhle. Ukujoyina iiScorpios ezimbini kufana nokudibanisa imiphefumlo yamawele. Akukho mfuneko yokuba uchazelane omnye nomnye ukuba ucinga ntoni okanye uziva njani. Kubudlelwane beScorpio kunye neScorpio, esi sibini sifumana intuthuzelo ngokuqhelana.
Zombini iiScorpios kule nto yokuthandana ziyimiphefumlo enamandla. Banobume obufihlakeleyo obufanayo, kwaye ukuqhuba kwabo ngesondo kungabikho kwiitshathi! Kukho unxibelelwano oluninzi lomzimba xa ii-Scorpios ezimbini zithandana. Bayakonwabela ukuba bodwa. Ii-Scorpios ezimbini ziyonwabile ukuchitha ubomi bazo bonke kwinqaba yothando eziyenzayo. Apha kukho ubungozi njengoko le duo ikonwabele kakhulu ukuba ingavala ilizwe liphela.
Umcimbi weScorpio kunye neScorpio uhamba ngokukhawuleza. Kukho ixesha elincinci phakathi kokuthandana nokuzibophelela ngokupheleleyo. Zisuka nje, banoluvo olungachazekiyo lokuba bahlala kunye. Ukujonga emehlweni omnye komnye, kulapho babona khona ngonaphakade. Inye into eqinisekileyo. Xa enye iScorpio iwela enye, lolunye lolwalamano olushushu kakhulu olunokusekwa sisibini.
Itheyibhile yeScorpio neScorpio
Ukuhambelana kweScorpio kunye neScorpio
IScorpio kunye neScorpio Uthando
IScorpio kunye neScorpio ngesondo
Ukuhambelana kweScorpio Indoda kunye neNkqantosi yabasetyhini
Umfazi weScorpio kunye nokuNgqinelana koMntu weScorpio
IScorpio kunye neScorpio Love Match Wrap-Up
Umdlalo we-Scorpio kunye ne-Scorpio uthando babelana ngendlela efanayo yoburharha. Yinto elungileyo kuba ibavumela bonwabe kakhulu njengoko besabelana ngeziqhulo ezihlekisayo kunye nokuhlekisa kwihlabathi. Zombini iiScorpio ziyazi ukuba konke kusegama lokonwaba kwaye iziqhulo azinabungozi. Abathathi nzulu kakhulu, ke ivumela umoya phakathi kwabo uhlale ukhanya.
Ngamanye amaxesha le duo iya kuthetha ngekhowudi. Isibini iScorpio kunye neScorpio banokuba namagama ayimfihlo okanye amagama kuyo nayiphi na into ekubhekiswa kuyo. Unxibelelwano lwabo lwe-psychic lwenza ukuba olu hlobo lonxibelelwano luphumelele ngakumbi. Sebenzisa le ndlela ifihlakeleyo yokunxibelelana kuvumela abo babini ukuba baqhubeke nokonwaba bodwa. Yenye nje indlela yokusika umhlaba nokwenza umhlaba ube ngowabo.
Xa amanzi eyinto yabo elawulayo, akumangalisi ukuba iiScorpios ezimbini zinemvakalelo. Buva ubunzima bokunxibelelana kwabo ngokunzulu ngakumbi. Uthando phakathi kwabo luba nentsingiselo engakumbi. Xa isabelo sisondele kakhulu, baziva bekhuselekile ngokwaneleyo ukuba bangaveza iimvakalelo.
Umhlaza womfazi ebhedini kunye nendoda ye-taurus
Ukuqina apho ii-Scorpios ezimbini zithandanayo kunokujika kukhulu. Ekuqaleni uthando lwabo luyakhula mihla le, kwaye kubonakala ngathi baphila intsomi. Kodwa kuyinyani kwindalo yabo, iiScorpios zifuna ukunyusa imeko. Bahlala bekhangela ezinye. Yimizamo engagungqiyo yokuphakamisa iimvakalelo zovuyo abasele benazo.
Ekugqibeleni, le duo ihlasela ithafa. Kulapho imithwalo yathabatheka iwa khona. Ngumzuzu wokuthatha isigqibo kubudlelwane. I-Scorpio kunye ne-Scorpio ziyathandana ziya kuyenza okanye ziyaphule. Konke kuxhomekeke ekubeni baya kwamkelana na emva kokuba bonke abangaboniyo bewile.
Ubudlelwane beScorpio kunye neScorpio yenye yesithembiso esimnandi. Kodwa, ayikho ngaphandle kwezilingo zayo. Zombini iiScorpios zifuna iqabane elizinikeleyo kulwalamano. Ngelixa bafuna ukuzibophelela, banokufumana ukwaneliseka ngomnye. Ngenxa yokuthanda kwabo ukukopela, ukuthembela koku kubhanqa kuhlala kumhlaba ongazinzanga.
IScorpio sahlula ngokulula ukuba kuthetha ntoni ukuzibophelela 'kulwaneliseko olungenantsingiselo.' Yindlela yendalo yeScorpio yokuvukela kwimida yokuzibophelela. Ingathi indalo yeScorpio iyabanyanzela ukuba bamelane nemithetho kunye nemimiselo 'yehlabathi'. Ukubeka ezimbini i-Scorpio ndawonye kuthetha ukuba baya kuba nendlela yokuqikelela xa iqabane lilahleka. Ukucinga nje malunga nokuphambuka kuyakwanela ukubangela ubunzima.
I-Scorpios yindawo yokudibanisa. Ngaphandle kobomi obungenasimilo bobuScorpios ngamanye amaxesha bahlala, basaqhubeka noxanduva. Baya kulwalamano kunye neenjongo ezilungileyo. Ukuba intlantsi iyaphela, baya ngaphandle kobudlelwane ngolwaneliseko.
Esi sibini siza kuchitha ixesha elininzi kangangoko sinakho kwindlu abasabelana ngayo. Bakhetha ukugcina umhlaba ungaphandle. Iyabenza bagcine iimfihlo zabo. Ikwavumela ukuba bakhusele ubudlelwane babo kukuphazamiseka kwangaphandle. Oku kusondelelana kubonakala kumnandi ekuqaleni kobudlelwane. Kodwa, ukungabikho kwenkululeko kuthembisa inzondo kunye nokudikwa phantsi kwendlela.
Ukuba esi sibini sifuna ingoma yomxholo yokuchaza ubomi babo bezesondo, iya kuba yi-KISS's 'Masibeke i-X kwezesondo!' Umdlalo we-Scorpio kunye ne-Scorpio uthando ujoyina abantu ababini abane-libidos ezifanayo kunye. Ukuba kunjalo, kungcono ukuba le duo ihlala kwindawo engenabantu. Ucingo olukhulu oluphakathi kwezindlu lunokusindisa abamelwane!
Yinto elungileyo Scorpios yimiphefumlo efihlakeleyo. Ayizizo ezokubonisa esidlangalaleni uthando. Awuyi kufumana ii-Scorpios ezimbini ezijika ubushushu kwindawo kawonkewonke enobungozi. Xa bevula ubushushu, kubucala kwigumbi lokulala elitshixiweyo. Bazoba i-shades ngokuqinileyo. Ndiyathemba ukuba, iindonga azikhuselekanga. Xa begcina kwindawo efihlakeleyo yabo bonke, iiScorpios ezimbini ziya endle. Esi sibini sikhupha izithintelo zabo ngokukhawuleza njengeempahla zabo!
Icala elisezantsi kwi-libidos e-lusty yi-Scorpios zithambekele ekubeni nemicimbi eyimfihlo. Okubi nangakumbi, abaxoleli kwimicimbi enjalo ukuba amaqabane abo ayakopela. Kuba enye iScorpio imazi kakuhle omnye umntu, kukho ithuba elihle elinye okanye omabini amaqabane aya kuba nomona ngaxa lithile. Ikhwele linokuvela ngenxa yokwaphula umthetho okwenyani okanye umntu obonwa ngempazamo. Incoko edlalwayo nenomdla nomntu ongaphandle kobudlelwane ziindaba ezimbi. Kwanele ukucima iintlantsi zokuvutha komsindo!
Abathandi beScorpio bafuna umonde kunye nokuqonda okuninzi kumaqabane abo. Ingxaki phakathi kweScorpios ezimbini kuba zinokuhanahanisa. Kunqabile ukuba banike umonde abafuna ukuba bawunikwe liqabane. Isini phakathi kweScorpios ezimbini sisezulwini. Kodwa, ubutshaba obuvela kumona omkhulu bungaziva ngathi sisihogo.
Unxibelelwano lweScorpio kunye neScorpio
Ukuhambelana kweScorpio kunye neScorpio kukhetheke ukuba le duo idlala ngokufanelekileyo. Badibana kakuhle kwinqanaba lobukrelekrele. Omabini la maqela akufumanisa kulula ukuthetha omnye nomnye, kodwa basenomdla wokugcina iimfihlo. Ubuncinci iqela ngalinye liyazi ukuba yindlela nje yeScorpio. Bafuna iimfihlo zabo ukuze bazive bekhuselekile. Ukuphisa phantsi kwescorpio ukuzithemba okumnandi liqula lokungaqiniseki. Akukho mntu uyiqondayo loo nyaniso ngcono kunobunye ubuntu beScorpio.
IiScorpios zikwicala lemoody. Xa bejamelana neemeko ezigqithileyo, bayayiqonda into abayifunayo. Kuyacaca ukuba kukho isidingo sendawo yobuqu. Kodwa, enye iScorpio inokusebenza njengeankile yenye. Kodwa, iingxaki ziya kuvela ukuba bobabini bakwimeko yokudakumba ngexesha elinye. Ukudakumba abaziva kungaguquka kube sisangqa esikhohlakeleyo. Yandisa ukutshintsha kwemood ngaphezu kwexesha eliqhelekileyo kunye nokubandezeleka kwabo ngokweemvakalelo. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu kwiScorpios eluthandweni lokuhlala unxibelelana nehlabathi elingaphandle konxibelelwano lwabo.
IiScorpios zifumana kulula ukunxibelelana nazo xa zabelana ngeemvakalelo zazo. Banonxibelelwano lwengqondo. Le duo akufuneki ithethe ilizwi komnye nomnye ukuze aqonde ukuba kuqhubeka ntoni. Ingathi ngamatyathanga angabonakaliyo adibanisa imihlaba yawo yangaphakathi. Ukuphosa amehlo ngapha kwegumbi okanye indlela ethile yokuncuma kuthetha yonke into abafuna ukuyithetha.
Ukuba oku kubhangqwa kuhlala kungathembeki omnye komnye, sonke isihogo siyaphuma. Unxibelelwano phakathi kwabo luya kuthatha elinye lamacala amabini. Baya kuyeka ukuthetha omnye komnye okanye bathuthunane. Ukuhlushwa kuqala ngamazwi abuhlungu kunye neemvakalelo. Kuba bazana kakuhle, bayayazi eyona nto ibuhlungu. Iingxoxo zinokuthula okanye isihogo ngokuqinisekileyo.
zii-capricorn kwaye zikumdlalo olungileyo
Ukungqubana kweScorpio kunye neScorpio
Ukuba ubudlelwane beScorpio kunye ne Scorpio bukhokelela emtshatweni, aba babini bahlala phantsi. Xa benabantwana, bahlala beza kuqala njengabo bonke uxanduva lwabo lwemihla ngemihla. Kungenzeka ukuba ubudlelwane buxakeke ngokubhekisele kwiminqweno yabo yesini. Ukudinwa kukukhathalela imisebenzi yasekhaya kunye nabantwana kunciphisa ixesha abalichitha kunye.
Ukuba akukho bantwana babandakanyekayo, olu lwalamano lunokungena kumandla omzali nomntwana. Xa oku kusenzeka, elinye iqela lenza konke ukukhulisa. Omnye uphela ethatha iqabane lokukhulisa ngokungakhathali. Uthando luphela ngokukhawuleza xa kungekho mlinganiso olinganayo.
Ukuphela kwendlela yokuphuma kulo mkhwa kukuba izithandani ezibini zibuyisele imali eseleyo. Kufuneka babonakalise uthando nokukhathalelana kwakhona. Ukuba indawo epholileyo ihlala ixesha elide, enye okanye zombini iiScorpios kunokwenzeka ukuba ziphambuke.
IiScorpios ezimbini zinxibelelana ngcono ngokwabelana ngesondo. Nangona bexoxa ngeemvakalelo, abaze babelane ngayo yonke into nabanye. Bayazibamba, ngokuyinxenye, ngenxa yendalo yabo, kwaye ngenxa yokuba kukho inqanaba lokungathembani elingunaphakade.
IiScorpios zinobunzima obukhulu bokuthembana. Ukuziqhelanisa kuzala indelelo. Kunzima kwiiScorpios ukuba zihloniphane kuba zisazi kakhulu ngomnye nomnye. Kwangelo xesha, abazi nto kwaphela.
IScorpio kunye neScorpio Polarity
Ukuhambelana kweScorpio neScorpio, ngokuyinxenye, kuxhomekeke kwibhalansi kwiipolarities. Yonke imiqondiso iyahambelana nesinye sezi polarities ezimbini. Amandla anamandla yiYin kunye neYang. I-Yin i-passive, i-sensitive, kwaye ivulekile. U-Yang uyabambelela kwaye ujolise ekwenzeni. Le mikhosi iyancedisana.
IScorpio iyahambelana neYin. Ukungabikho kwemikhosi yeYang, kunokubonakala ngathi kukho ukungalingani kwiipolari ezimbini zeScorpios. Ukwabelana ngeYin amandla kwenza omabini amaqabane abe novakalelo, enembile, kwaye avulelane. Ngethuba nje kukho ukuvumelana kubudlelwane, ezimbini zeScorpio zinokwanela.
Ukuba iipolarity polarize, ikhokelela kukungalingani. Kulapho ke inkathazo isenziwa kukunxibelelana kweScorpio kunye neScorpio. Zombini iiScorpios ziya kuba namandla kwaye zibe ndlongondlongo ukuba kukho ukungalingani kweYin. Isiphumo kukungaziphephi kweemeko eziguqukayo zityana kunye nengqumbo. Ukungalingani kwe-Yin kunokwenza zombini Scorpios causalities zemfazwe yeemvakalelo. Baqala ukulwa ngalo lonke ixesha kwaye bathetha izinto abangasokuze bazibuyise. Ukwamkela amandla eYang kuya kunceda ukuphucula ubudlelwane. Iya kunceda ekuthinteleni ukuxhomekeka kwelinye ikhowudi. Zombini iiScorpios kufuneka zisebenze ngakumbi kwaye zithe ngqo, ngakumbi xa zibonisa iimvakalelo.
Imiba yeScorpio kunye neScorpio
Umgama phakathi kweempawu kwivili le-zodiac ngumlinganiso. Umzobo yinto umntu ayisebenzisayo ukumisela ukungqinelana. IiScorpios zingumqondiso omnye, ke akukho mgama phakathi kwazo. NgeScorpio kunye ne-Scorpio uthando lutshatisa iifom zokulinganisa umba wokudibana.
Umba wokudibana uthetha ukuba obu budlelwane busebenza njengesipili. Ukuba iScorpio esinye sikhululekile ngokwaso, ke siyonwaba ngomnye. Obu budlelwane buyaqina ukuba omabini amaqela ayazamkela ngenxa yento ayiyo. Zibuyelana emva kweempawu ezifanayo kunye nokuziphatha. Ukufezekisa ukwamkelwa ngokwakho kuthetha ukuba le duo iyakwazi ukwamkelana ngokulula ngakumbi.
Ngama-Scorpios amabini kwindandatho yothando, kufana nokujoyina ii-clones okanye amawele. Kukho izibonelelo zonxibelelwano, kodwa kukho ukungalunganga kwakhona. Ukufana kakhulu kuthetha ukuba iiScorpios ezimbini zinokuphela zingena kwimithambo-luvo yomnye nomnye. Omabini la maqela afuna inkululeko kunye negumbi lokukhula ukugcina ubudlelwane busempilweni. Kodwa, ayiyiyo indalo yeScorpio ukuba uzive ukhululekile ukuvumela ukuzimela kweqabane. Umona yimvakalelo yeScorpios zonke ziqhelene nazo.
Ngaphandle komgama phakathi kwabo, ukuthandana kunye neziqholo kujika kube yintuthuzelo egqithileyo. Esi sibini sithatha omnye nomnye ngokungakhathali. Ukukruquka kuyaqhubeka. Inqala iyalandela. Kukuhla kwezinto ezimbini iiScorpios ezingavumiyo ukukhula.
I-Scorpio kunye ne-Scorpio Elements
Kubuchwephesha beenkwenkwezi, zonke iimpawu ze-zodiac zihambelana nenye yezinto ezine: Umlilo, Amanzi, uMhlaba, okanye uMoya. Izinto zinempembelelo ekuziphatheni kunye nakwimpumelelo yobudlelwane bothando. Kubudlelwane beScorpio kunye neScorpio, omabini amaqela ahambelana namanzi.
Isixhobo samanzi senza iScorpio enembile. Kuthetha ukuba bahlala benza iqhina le-psychic. Banendlela eyoyikekayo yokunxibelelana abanye abaninzi abangayiqondiyo. IiScorpios ziyazana ngokwaneleyo akukho mfuneko yokuba zithethe ukunxibelelana. IiScorpios ezimbini 'ngamawele' anezinto ezinqabileyo kodwa ezinqwenelekayo zabantu abasondeleyo.
Amanzi enza ukuba iScorpio sibe novakalelo kwaye siphuphe. Baneenjongo ezinkulu kunye namaphupha anomdla owaneleyo wokubabona. Ngama-Scorpios amabini kwi-helm, kuncinci ukunqanda le duo ekufezekiseni konke abakucingayo. Kulula ngokulinganayo kwiiScorpios ukwenza indlwana yothando encinci apho bathintela khona umhlaba wonke.
Unxibelelwano phakathi kweScorpios alunakuphikwa kwaye lwenza iifom ngokukhawuleza. Umdlalo wothando uqala njengabahlobo kodwa usiya kubathandi ngaphakathi kwemihla embalwa yokuqala. Ubunzulu bothando lwabo bukhula ngokugudileyo kwaye bunzulu njengamanzi angenazingxaki. Ikhaya lizibuko abahlala bebuyela kulo xa befuna indawo yokukhusela kwilizwe labo labucala.
nini ixesha elizayo apho siza kubona i-halley's comet
IiScorpios ziqhuba kakuhle kwibala lomtshato kwaye zenza abazali ababalaseleyo. Ngenxa yokuba bonwabela ixesha elininzi kunye, banokusebenza kakuhle kunye. Ubungqongqo bemvakalelo yobudlelwane bushiya omabini amaqela ebethiwe! Kuyamangalisa xa iiScorpios zingena nzulu kwindawo yeemvakalelo. Kodwa, kufuneka beze nomoya ngamanye amaxesha. Inkululeko ethile yeqela ngalinye ibalulekile ekukhuleni komntu.
Ukufunda iimvakalelo zomnye kuncedisa ukuhambelana kweScorpio kunye ne-Scorpio. Kukho unxibelelwano olunomdla xa Indoda yeScorpio kunye noMfazi weScorpio ewela omnye komnye. Zizinto ezinobuntu kakhulu. Bayazana kuba bazazi kakuhle. Kodwa, ukuqonda kwabo omnye komnye kudlula amandla abo okuqikelela iimfuno. Endaweni yoko, umntu weScorpio kunye noMfazi weScorpio bayahambelana kwinqanaba le-psychic.
Indoda yeScorpio kunye noMfazi weScorpio iyawa ngokukhawuleza. Umtsalane ungoko nangoko kwaye unxibelelwano lwabo lothando, luyamangalisa! Xa uthando luhlasela, kufana nombane obabethayo bobabini. Ubudlelwane buhamba ngokukhawuleza buvela kubahlobo ukuya kubathandi ukuya kumaqabane ebomini. Abahlobo kunye nosapho bayakhwaza besuka ecaleni ukuba 'bacothise' kwaye 'bangangxami izinto.' Kodwa, oku akuyeki kwii-Scorpios ngothando. Indoda yeScorpio kunye noMfazi weScorpio sele bekhetha iidrapes zekhaya labo elitsha kunye.
Indoda yeScorpio ifuna ukwakha umhlaba kwiqabane layo apho igcina ikhuselekile khona. Izizathu zakhe zokumkhusela zimbini kwaye, ngokuyinxenye, kukuzingca. Ufuna ukuba azive ekhuselekile ngalo lonke ixesha, kwaye yimvelo yakhe ukukhusela. Kodwa, ufuna ukugcina umhlaba wangaphandle ungaphuli eyakhe. Kungokwemvelo ukuba iScorpio Man ifune ukuba noMfazi weScorpio konke kuye. Akamkhulu ekwabelaneni neqabane lakhe nabani na. Yinto elungileyo ukuba iScorpio Woman ivume ukwahlukaniswa okunjalo. Naye ungomnye ofuna ukwenza indlwana yothando akukho mntu unokungena kuyo. Le miphefumlo mibini inqwenela ubumfihlo kwaye ithande lonke ixesha elizimeleyo elinokufumana ngalo.
Kumdlalo wothando weScorpio neScorpio, uthando luyimilingo. Babelana ngeminqweno yabo kwaye balandele amaphupha kunye. Kulula kwesi sibini ukuqala usapho kunye nokwakha ikhaya eliphuphuma ziintsikelelo zothando. Unxibelelwano lwabo lomzimba luyamangalisa. Indoda yeScorpio iyazi zonke iindlela ezifanelekileyo zokugcina iScorpio Woman yanelisekile ngokwesondo.
Umfazi weScorpio ukhululekile kuko konke ukuthintela kwiingalo zendoda yakhe. Ungoyena mntu umema kwaye unomdla owakhe waziwa. Ukonwaba ngokwesondo afumana kuko kufezekisa iindawo eziphakamileyo ze-euphoric ngonxibelelwano ngalunye.
Emva koko ungena kwicala lesithunzi seScorpio. Indoda yaseScorpio kunye noMfazi weScorpio bazokulwa nomntu okhokelayo kule ndawo yokudibanisa. Bobabini banobuntu obuqinileyo kunye nobomeleleyo abangakuthandi ukukhokelwa ngabanye. Ekuphela kwendlela yomcimbi kukuvumela isivumelwano esingamashumi amahlanu anamashumi amahlanu ukuba silawule. Ukuba bayatshintshana ekukhokeleni ubudlelwane, esi sibini sinokugcina ubudlelwane bemvisiswano.
IiScorpios ezimbini kunye neakhawunti yebhanki egcwele imali azixubeki. Ngelixa bobabini bengamabhongo abenza imali, kukho imingxunya embalwa enkulu koluhlahlo-lwabiwo mali lwe-duo. Inkcitho yemvakalelo kunye nemvakalelo yokufumana ilungelo kubangela ubunzima bemali. Indoda yeScorpio ithi, 'Kutheni ungayichithi? Awunakuhamba nayo? ' Umfazi weScorpio uthi, 'Kodwa, ndiyayifuna le ngxowa yeGucci. Ndimele ndibonakale kakuhle. ' Uvakalelo olunje lushiya iakhawunti yebhanki isopha. Ukuba le duo ayenzi nto ukulawula imicimbi yokuphuma kwemali, iakhawunti iyaphuma!
Ubudlelwane beScorpio kunye ne Scorpio banezilingo. Xa izinto zilungile, ziyamangalisa. Xa izinto zisiya emazantsi, ukubhangqwa kungangqina kubuhlungu. Izitshixo zokwenza umsebenzi woqhagamshelo lweScorpio kunye neScorpio zibandakanya unyamezelo oluninzi. Ikwabandakanya isixa esilinganayo sokulalanisa. Umonde nokwamkelwa kusombulula imiba yobudlelwane beScorpio kunye neScorpio.
Umfazi weScorpio kunye neNdoda yeScorpio bathandana ngokungathi bahlala besazana. Xa le duo idibana, kuvakala ngathi iinkwenkwezi ziye zahambelana esibhakabhakeni. Unxibelelwano lweScorpio kunye neScorpio luyatshisa, lusondele, kwaye lunika umdla. Unxibelelwano ngokwesondo lolunye nasiphi na isibini esikwingqondo yabo elungileyo sinokulangazelela. Ubunzulu beemvakalelo kuphela kwento ephikisana nokuqina kwesondo kwezi zinto zibini zabelana ngazo.
Ukuhambelana okuphezulu kweScorpio kunye neScorpio kususela ekwazini iminqweno yomnye nomnye. Ukuba uMfazi weScorpio kunye noMntu weScorpio bafumene uthando lwabo, abayi kuba nangxaki ekuthandaneni. Le duo isebenza njengesipili somnye nomnye. Ukuba kukho imiba yokuthanda ngokwakho naliphi na iqela, lithuba lokufunyanwa kwalo.
Umfazi weScorpio kunye noMntu weScorpio baneenjongo ezifanayo kunye namabhongo. Bobabini banosapho olusondeleyo kunye nabahlobo abathandekayo. Le duo iphupha ngomtshato, ukuhlala ngokuzolileyo, kunye nokukhulisa usapho. Banokude bacwangcise ukusebenza kunye kuba abanakufumana ngokwaneleyo omnye komnye. Umfazi weScorpio kunye neNdoda yeScorpio banesidingo esingafunekiyo sokuba nesithandwa sabo.
Isantya esikhawulezayo solu dlelwane sishiya iiScorpios zombini zijikeleza intloko. Bayabanjwa kwindalo yothando ngaphambi kokuba bathathe ujongo kwixesha elide. Xa ufaka imali kwitshekhi yokwenyani, uMfazi weScorpio kunye noMntu weScorpio kufuneka bazilungiselele. Kanye njengokuba zininzi ngokufanayo, ezo zinto zixhaphakileyo zenza ukungqubana okukhulu.
Icala elisezantsi kuyo yonke le ntyatyambo luthando kukuchitha ixesha kunye kunokubonakalisa ukutshabalalisa. IScorpio ukuya kunxibelelwano lweScorpio kunokukhokelela kuwo omabini amaqela atshona emanzini ngokweemvakalelo abahamba ngokulula ngokwesiqhelo. Xa umnqweno ukhokelela ekuthandeni nasekukhweleni, ulwalamano lunokujika lube yingozi. Xa uMfazi weScorpio kunye noMntu weScorpio esiya entloko, akukho zibambiso zithintelweyo. Banoburhalarhume ngomsindo wabo njengoko benothando.
I-Scorpios iyasokola ukuba ngubani umphathi kulwalamano. Ngomfazi weScorpio kunye noMntu weScorpio, akukho qela lithanda ukuthatha isihlalo sangasemva. Umzabalazo wabo wokulawula ubudlelwane unokuba krakra. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba abafundanga ukudlala kakuhle kunye. I-Scorpios iya kubeka konke ukukhathazana ukuba bayalwa.
Umdlalo we-Scorpio kunye ne-Scorpio uthando yenye yokuhambelana okuthembisayo. Imvakalelo phakathi kweScorpios yenza olu nxibelelwano lothando lusebenze nzulu kwaye lube namandla! Ukuba omabini amaqela ayakhathalela ukuba angakhukuliseki kukuqina kweemvakalelo, kuhamba ngokutyibilika endleleni yothando!
Ngaba ubudlelwane bakho busondele kwaye bunzima njenge-Scorpio kunye ne-Scorpio? Ngaba uyazi ii-quirks zeqabane lakho kunye ne-idiosyncrasies? Mhlawumbi ufuna ukufumanisa imiceli mngeni ojamelana nayo kubudlelwane obukhoyo. Nokuba yeyiphi na imeko, i-Daily Horoscope Astros inokukunceda ufumane into ehambelana nayo! Konke okufuneka ukwazi ukuba kuyafikeleleka ngokucofa imouse!
Funda konke malunga noMqondiso weScorpio Zodiac
Cofa ukuze ufunde konke malunga Iimpawu zeScorpio, Ubuntu, kunye neempawu !
Ufuna uthando? Cofa ukuze ufunde konke malunga Ukuhambelana kweScorpio !
Fumana ulwazi olunzulu malunga Indoda yeScorpio !
Chaza imfihlelo ye Umfazi weScorpio !
Ngaba unayo iNdodakazi okanye iNyana yeScorpio? Cofa ukuze ufunde konke malunga ne Umntwana weScorpio !
Umfazi we-aries kunye nobuhlobo bendoda yescorpio
Ithetha ntoni i-33 kwinombolo
Indoda kunye ne-pisces yowesifazane ebhedini
Taurus indoda ebhedini kunye umfazi virgo